Archive du 09-juin-2022
Delestazy manara-penitra Nahita ny tsy fahita hatramin-dRajoelina!!!
Raha hitaraina sy hiantso vonjy ary haneho hahatezerana eny fa misy mahateny ratsy mihitsy aza ny olom-pirenena manoloana ny delestazy mankaleo, dia raisina ho tsy fitiavana sy finiavana hitsikera ny fitondram-panjakana.
Tambajoatra mpangala-tany “Ravao, fongory, gadrao,…”
Ankehitriny, 80% amin’ny raharaham-pitsarana dia ady tany avokoa. Ampahatelon’ny raharaha ihany no voatsara. Isaky ny manao fitsidiham-paritra, tsy misy toerana na iray aza tsy hisian’ny fitarainana momba ny fananan-tany,
“Kidnapping” hafahafa 10 voasambotra, teratany vahiny ny 4
Tera-tany vahiny miisa 4 ahitana Afrikanina 2 sy sinoa 2 niampy Malagasy 6 no efa hanaovana fanadihadiana amin’izao taorian’ny nisamborana azy ireo
Toby famokarana herinaratra Sahofika Nekena ny 30 tapitrisa euros anjaran’ny Fanjakana
Lany teto anivon’ny Antenimierampirenena omaly 8 jiona 2022 ny volavolan-dalàna laharana faha-001/2022 tamin’ny 27 janoary 2022
475 miliara Ar tsy very tamin’ny Jirama Mafia very fihinana no migafy, hoy ny Minisitra
Eo anatrehan’ny olana amin’ny famatsiana herinaratra izay antony iray mampahery vaika ny delestazy, niaiky ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo Andry Ramaroson omaly teo anatrehan’ny solombavambahoaka fa tena misY
Zezoita sy ny tantaram-pirenena Noraketina ho boky ny fifamatorana
Manamarika ny faha-50 taonany ny Faritra Zezoita eto Madagasikara, izay ny 08 jona 1971 izany hoe ny taona 2021 no tena tsingerin-taona katroka saingy tsy afa-nankalaza izany noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana, ka izao
Miteny ny dokotera Tsy mbola vita eto ny famindrana taova
Diso malaza loatra eto amintsika efa ho iray volana izao ny resaka halatra taova sy ny famindrana taova. Nitarika izany voalohany ny halatra voamaso nahazo ireo ankizy maromaro tany amin’iny faritra atsimon’ny Nosy iny.
Zotran-dalamby FCE Tena tsizarizary ny fitaovana…
Marary ny zotran-dalamby FCE (Fianarantsoa Côte-Est) na efa mba nahavelom-panantenana kely aza ny famelomana azy. Nanomboka ny volana may 2022 teo no nitokona ny mpiasa,
26 JONA AO ALASORA Zaza 160 no hoforaina, zokiolona 1000 omena fanampiana
Samy manana ny fomba entiny hanamarihana ny fankalazana ny tsingerin-taona faha-62 taona nahazoantsika ny fahaleovantena ny kaominina tsirairay avy.
Group JCR Nitondra tohana ho an’ny Barea U23
Naneho ny fahavononany amin’ny fanohanana ny taranja baolina kitra omaly ny vondrona JCR. Teny amin’ny Green club Vontovorona no nanaovana ny lanonana.
Randrana sendikaly “Tsy amin’izay laoniny ny fanambaran’ny CNAPS
Henonay ny fanambaran’ny CNAPS, hoy ny Randrana sendikaly, hoe miandry didy fampiharana iny fisondrotan-karama iny.
Sarona « dalle » eto an-dRenivohitra Misy maka ny ankamaroany, atahorana hamono olona
Misy manongotra ny ankamaroan’ireo sarona dalle eto an-drenivohitra. Ankoatra ireo eny Analakely dia nahitana izany maromaro indray teny Anosy izay marihina fa lavakabe tokoa ny ao ambaniny.
Mpitsabo FITRAMA “Manaova vakisiny!”
Tsy sehatry ny fivarotam-panafody ny mpitsabo Malagasy FITRAMA, hoy ny filohany, Jean Nirina Rafanomezantsoa,
Joseph Yoland “Mila ovaina ny raikipohy teren’ny mpanjanaka eto”
Efa nanao ilay hoe “Refondation du système pour le reel développement de Madagascar” ny tenako fony mbola CST, hoy ny mpanao politika, Joseph Yoland.
Sarimihetsika Malagasy Nodimandry i Rija Ratafika
Misaona ny tontolon’ny sary mihetsika Malagasy. Nodimandry omaly teo amin’ny faha-43 taonany ilay mpilalao sary mihetsika Rija Ratafika.
Arendrina vita malagasy Matin’ny vita sinoa ny tsena
Roa herinandro eo ho eo sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 Jona isika. Ankoatra ny fihinanana sakafo miavaka amin’ny mahazatra dia tsy afa-misaraka amin’ny fetin’ny Asaramanitra ny
TSIPOAPOAKA Ramatoa iray no torana vokatry ny fahatairana
Efa tena tsy ara-dalana intsony ny toe-pahasalaman’ny ankamaroan’ny Malagasy amin’izao vokatry ny hasarotan’ny fiainana.
Miaka-pofona ery fa hoe miady amin’ny tambajotra mpangalatra sy mpangorona tany.
Zava-dehibe izany, fa raha tsy nandrava hefa nanongam-panjakana 13 taona lasa efa tsy any amin’io intsony adihevitra e !
Niaraha-nahita sy naheno iny ny zava-nitranga nandritry ny fotoam-pandraisam-pitenenan’ny filoham-pirenena teny Ivato omaly.